Iziqhingi ezihamba phambili namabhishi eMalaysia | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Iziqhingi, I-Malasia, Ukuzilibazisa, Ukuhamba kwe-Asia
I-Southeast Asia inezindawo ezinhle kakhulu futhi ngikholwa wukuthi amabhishi neziqhingi ezihamba phambili emhlabeni zikhona. Kuyindawo ekude, amahora amaningi okundiza, kepha izinzuzo zihle ngakho-ke kufanelekile ukundiza futhi uhambe isikhathi esithile.
I-Malasia Umbuso wobukhosi womthethosisekelo owenziwe ngezindawo eziningana inhlokodolobha yazo iKuala Lumpur. Inabantu abacishe babe yizigidi ezingama-30 ngakho-ke ingelinye lamazwe anabantu abaningi esifundeni. Igama eliyigugu elisetshenziswa abaningi ukuchaza leli zwe. Thola ukuthi kungani!
1 Iziqhingi ezihamba phambili eMalaysia
2 Amabhishi amahle kakhulu eMalaysia
Iziqhingi ezihamba phambili eMalaysia
Iziqhingi zaseMalaysia ziyehluka kakhulu ngakho-ke kukhona okuthile kuzo zonke izinhlobo zabahambi kepha uma uthanda ilanga nolwandle, okunikezwayo kuyamangalisa. Noma yikuphi ukukhetha kuzohlungwa ngamaphuzu akho wokubuka, kepha kunjengoba ngishilo ngenhla, kufanele uhambe uzitholele ngokwakho.
Phakathi kweziqhingi ezinhle kakhulu kukhona I-Perhentian. Basogwini olusenyakatho-mpumalanga yePeninsular Malaysia futhi bangu- indawo enhle phakathi kojosaka lomhlaba. Banamanzi acacile futhi yingakho ungakwazi go snellingelling izinyathelo ezisuka olwandle futhi uzijabulise ngezilwane zasolwandle ezicebile.
Ukusuka emadolobhaneni okudoba ungangena esikebheni uhambe uhambo oluya khona bheka oshaka nezimfudu zasolwandle noma ukujabulela ukushona kwelanga. Futhi ingasaphathwa eyokuduka ekushoneni kwelanga ilele izungeze umlilo.
Kukhona izindawo zokuhlala zazo zonke izinhlobo namananiUkusuka kokumba eqolo njengeTuna Bay Island Resort kuya kwezishibhile njenge-Abdul Chalet. Ukufika lapho kufanele uthathe ibhasi eKuala Lumpur, eHentian Putra Station, uhambe amahora ayisishiyagalolunye. Noma undiza usuka enhlokodolobha uye eKota Bharu uthathe itekisi eliya eKuala Besut ogwini.
I-Tioman kungenye isiqhingi esihle. Kuyinto ethandwa kakhulu emakethe izivakashi kusukela umagazini Time wabhapathiza njengoba isiqhingi esihle kunazo zonke emhlabeni kwabangu-70. Ezokuvakasha seziliguqule kancane kusukela lapho kepha amadolobhana asathandeka futhi indawo yokuhlala iyahlukahluka.
Ungafika lapho ngesikebhe esisuka eSingapore noma ngebhasi ukusuka noma yikuphi eMalaysia ukuya eMersing futhi ukusuka lapho uhamba ngesikebhe amahora amabili. Noma ezindizeni ezincane ezivela eKuala Lumpur futhi. Uyakuthanda ukunethezeka kwase-Asia?
Ngakho isiphetho sinjalo Langkawi. Inganekwane ithi isiqhingi esiqalekisiwe, yize inhlanhla yashintsha lapho ngeminyaka yama-80 kwathathwa isinqumo sokuqondisa umnotho walesi siqhingi kwezokuvakasha. Isiqhingi sonke umsebenzi-kusha ngakho-ke lamuhla kuhle.
Uye amahhotela, amabhishi, izindawo zokudlela, imisebenzi yezivakashi futhi umbukwane ikhebula yamamitha angu-2.200 710 efinyelela kumamitha ayi-XNUMX ukuphakama futhi ikuvumela ukuba uyazise ngabo bonke ubuhle bayo. Ngokuya ngendawo yokuhlala, ungakhetha kusuka ehhotela lezitolo esitsheni sangaphambili sikakhukhunathi uye kuzinkathi ezine zonyaka.
Ukufika lapho ngeke ube nankinga ngoba kunezindiza zansuku zonke ezivela yonke indawo.
Ukuthola umlando ongeyena owengeziwe wamaMalay namagugu ongaya kuwo Penang, wake wacabanga ngeParele laseMpumalanga eMbusweni WaseBrithani. Kwakubalulekile emizileni yezohwebo yamaNgisi phakathi kwe-India kanye ne-Asia yonkana futhi yize yawela ekubonakaleni nezinguquko zezepolitiki zekhulu lama-XNUMX, ikwazile ukuziveza kabusha njengendawo yabavakashi.
IGeorgetown iyi Amagugu Omhlaba ngokusho kwe-UNESCO, isibonelo, futhi uhulumeni utshale imali ekwenzeni ngcono ezokuthutha zomphakathi, ukutshala izihlahla ezintsha, ukwenza izindawo zabahamba ngezinyawo nemicimbi yamasiko. Kuyaziwa ngefayela layo le- Amatafula okudla emgwaqweni futhi izivakashi zivame ukufika ngendiza ngoba inesikhumulo sezindiza zomhlaba wonke.
Uma uthanda ukudilika, indawo enhle kakhulu Labuan, isiqhingi esizinikele ekuxhaseni ngezinkulungwane zezinkampani ezingaphesheya kwezilwandle. Indawo yezimali yamasela anekhola emhlophe, singasho ukuthi, inesekethe layo leFomula 1.
Kepha njengoba ngishilo, ngaphansi kwamanzi kukhona amagugu afihlekile wabatshuzi futhi kunemikhumbi yase-Australia, yaseMelika ngisho nohlobo lwamathuna empi. Ngokwesibonelo, minyaka yonke, kukhunjulwa ukufa kwamasosha angama-3900 XNUMX eMpini Yezwe II.
Ukuhlala unesizungu, okunye kwalokhu okukwenza ucwile emqondweni wakho, kukhona isiqhingi ngu-Layang-Layang. Kuyisiqhingi esizalwa ngumhlaba esibuyiselwe olwandle ukusetha ifulegi endaweni ebangwa yiChina nakwamanye amazwe.
Amanzi acwebile akwaCrystal ngokujula okwehla ngamandla ngaphezu kwamamitha ayizinkulungwane ezimbili ogwini kungenye ipharadesi labatshuzi. Kubalwa, empeleni, phakathi kwabayishumi amasayithi wokutshuza angcono kakhulu emhlabeni. Kukhona indawo enhle yamakhorali namamitha angama-40 wokubonakala aqinisekisiwe. Noshaka, amahlengethwa, ama-barracudas, izimfudu nama-stingray.
Enye i-mecca yesiqhingi yokudilika yi- I-Sipadan yize ukuze kungabekeki engozini imvelo isikhashana manje, kuvunyelwe abatshuzi abayi-120 kuphela ngosuku. Amakhorali, izinkulungwane zezinhlanzi, oshaka, izimfudu yazo zonke izinhlobo futhi kukhona ngisho namathuna ufudu ngaphansi kwamanzi.
Iziqhingi U-Redang, isiqhingi esizimele rawa nezindawo zayo zokungcebeleka ezinhle (zonke ezakwa-sultan) kanye IPulau Pangkor, nomoya wabo waseMalay usahleli ohlwini.
Amabhishi amahle kakhulu eMalaysia
Manje sekuwukujika kwamabhishi. Ukuba nezinqwaba zeziqhingi eMalaysia ngaleso sikhathi kunamakhulu amabhishi amahle futhi eziningi zazo azaziwa kangako ngakho zishibhile, zinezivakashi ezimbalwa futhi zingokwemvelo ngokwengeziwe.
Okuthandwa kakhulu kunogu olusempumalanga yeNhlonhlo yaseMalay.. Kulula ukufinyelela kuzo ngoba kunezindiza ezishibhile futhi ziyindawo oyithandayo yokuphunyuka ngempelasonto. Nawa amabhishi we U-Redang, lezo zeziqhingi I-Perhentian namapaki olwandle asesiqhingini I-Tioman.
Ngakolunye uhlangothi kukhona amabhishi ogwini olusentshonalanga yeNhlonhlo yaseMalay. Ngikhuluma ngesiqhingi esingakhokhiswa ntela se Langwaki, enamabhishi amancane kodwa amahle nokuphila okuningi kwabavakashi, ngaphandle kwenkathi yemvula ebathintayo nezimpophoma ezingenakulibaleka, amabhishi esiqhingi IPangkor neBorneo, isiqhingi esabiwe yiMalaysia, i-Indonesia neBrunei.
Into ebalulekile lapho uvakashela iMalaysia neziqhingi namabhishi ayo phunyuka emvuleni. Isikhathi semvula siphakathi kukaNovemba noMashi, ogwini olusempumalanga. Lina kakhulu. Ngemuva kwalokho kuyadingeka ukuletha i-sunscreen eningi nezinambuzane.
Okunye, isifiso sokuzijabulisa futhi sijabulele ipharadesi lasemhlabeni kubonakala kimi singasoze santuleka.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqhingi » Iziqhingi namabhishi amahle kakhulu eMalaysia
UCarmina Yébenes Aguilera kusho
I-athikili ethokozisayo kepha imimoya ayicaci kimi. Uma ngiya ngo-Okthoba ngingahambela kuziphi iziqhingi ezazingenaso isimo sezulu esibi ?!
Phendula uCarmina Yébenes Aguilera